I-Trilogy ye-White City, inoveli emnyama evela eVitoria | Izincwadi Zamanje
UJuan Ortiz | | Abalobi, Izinhlobo, Amabhuku, Inoveli emnyama
La I-White City Trilogy uchungechunge olwenziwe ngumbhali waseSpain u-Eva García Sáenz de Urturi. Zontathu izincwadi zibe isethwe ezweni lakubo lomlobi (Vitoria, Álava). Yize sebethengisiwe ngaphakathi kohlobo lwenoveli yobugebengu, ukwakhiwa kweziza zabo nakho kufana naleso senoveli yabaseshi.
Izihloko zale saga zikhishwe ngaphansi kophawu lwe-Editorial Planeta futhi sezingaphezulu kwesigidi samakhophi aprintiwe athengisiwe kuze kube manje. Ngokwalesi sizathu, Umbhali weVitorian uthathwa njengombhali ngomthelela omkhulu eSpain namuhla. Akumangalisi ukuthi ku-2019 isitolimende sokuqala se-trilogy (Ukuthula komlungu) ilethwe esikrinini esikhulu.
1 Mayelana nomlobi, u-Eva García Sáenz de Urturi
3 Ukuthula KweWhite City (2016)
4 AmaRites of Water (2017)
4.1 Ukuvela komlingiswa
5 Uzobuya Nini (2018)
5.1 Ukuvuthwa okungokomzwelo kuka-Unai
6 Ukuvalwa ngobuciko kwesaga
Mayelana nomlobi, u-Eva García Sáenz de Urturi
Wazalelwa eVitoria, e-valava, ngo-1972. Wahlala e-Alicante kusukela maphakathi nawo-80. Kusukela esemncane ukhombise ukuthanda kwakhe ukufunda, uthando - ngamagama ombhali - aluthole kuyise. Uneziqu ze-optics ne-optometry, ngomsebenzi obanzi emkhakheni. Ubuye wasebenza e-University of Alicante futhi ungumfundisi owaziwayo.
U-Eva García Sáenz de Urturi ngokusemthethweni waqala umsebenzi wakhe wokubhala ngokuzishicilela ku-Amazon of Isaga sabadala phakathi no-2012. Umsebenzi wamukelwe kahle ngumphakathi kwi-Intanethi, okwaholela ekushicilelweni kwawo ngu-Esfera de Libros. Kusukela ngo-2013 ushicilele nabakwaPlaneta. Ngaphambi kwe- I-White City Trilogy (2016 - 2018), ishicilele amanoveli amabili (womabili kusuka ku-2014):
I-Saga ye-II eyaphila isikhathi eside: Amadodana ka-Adam.
Indlela eya eTahiti.
Kusuka kulayini wangaphambili we Ukuthula kweWhite City, umbhali ukwazile ukubamba umfundi ngezinganekwane zakhe ezimnandi nezilokhu zimangaza njalo. Amandla anjalo aqhubeka nokucaca ngokwengeziwe encwadini yesibili, Imikhosi yamanzi. Kodwa-ke, amanye amazwi abucayi - njengoCarmen del Río ovela kwingosi Umhambi Oyingozi- Bakhomba ukuthi "eyokugcina yezincwadi ayisheshisi kangako."
Isici esiyingqayizivele se-trilogy ukuzilibazisa kwezindawo eziyizifanekiselo kakhulu zedolobha laseVitoria, lapho kuba nengxenye enhle yemicimbi. Eqinisweni, ngenxa yalomsebenzi, umbhali wahlonishwa (ngabakhethi balalela umsakazo) ngeCadena Ser de Álava 2017 Award.
Izincazelo zesikhungo esingumlando seVitoria zichazwe kahle kakhulu futhi zinembe kakhulu. Ngendlela efanayo, amasiko ajwayelekile esifundeni amelwe ngokumangalisayo. Kanye nokuhlukahluka kwezibongo ezihlanganisiwe —okuvamile kakhulu e-valava— okususelwa enhlanganisweni phakathi kwama-paterfamilias nomphakathi odabuka kuwo (uLópez de Ayala, ngokwesibonelo).
Ukuthula kweWhite City (2016)
Idolobha laseVitoria linyakaziswa uchungechunge lokubulawa kwezithandani ezineminyaka yazo iphela ngokuphindaphindeka kwezingu-5. Ngaphezu kwalokho, izidumbu zezisulu zivela ezindaweni ezaziwayo edolobheni, zishiywe ezindaweni ezivusa uhlobo oluthile lwezimpawu. Le modus operandi ephazamisayo idonsa ukunakekelwa okuphelele koMhloli Wophiko Lwezokuphenya Ngobugebengu eVitoria, u-Unai López de Ayala, obizwa ngo "Kraken".
Umhloli onesiteketiso se-cephalopod yenganekwane unguchwepheshe ekuphrofetheni abenzi bobubi. Kepha kulolu phenyo oludidayo udinga ukwesekwa okwengeziwe, ngoba amasu ombulali afuna ulwazi oluthile ngemicikilisho yasendulo. Ngalesi sizathu, uKraken uphendukela kwisazi semivubukulo esinempikiswano (esake satholakala sinecala lokunye ukufa) ukuze siqonde kangcono umongo wokufa.
Njengenoveli enhle yemfihlakalo enetulo labaseshi, umlingiswa oyinhloko unomlingiswa ovelele futhi oyindida. Umhloli u-Unai López de Ayala wathola isidlaliso sakhe (uKraken) ngenxa yezinkinga ezimbili ezingangatshazwa. Okokuqala, isimo sakhe somzimba esihle ngokuhlangana nobuntu obenza izinto ngendlela engaqondakali, engaqondakali kwabaningi abaseduze kwakhe.
Okwesibili, ukuziphatha okweqile okuholela ekutheni axazulule ubugebengu obuyinkimbinkimbi kunazo zonke, ngoba "akekho umuntu ongafinyeleleka ematendeni akhe amakhulu." Ngaphezu kwalokho, akanqikazi ukukhawula imingcele yalokho okwamukelekayo ngokokuziphatha ukuze axazulule icala. Ngokuphambene nalokho, inkanyezi-co (evame ukuthukutheliswa yindlela yokuziphatha engajwayelekile kaKraken) ingumuntu onengqondo kakhulu, Umsizi Khomishani u-Alba Díaz de Salvatierra.
Imikhosi yamanzi (2017)
En Imikhosi yamanzi, u-Eva García Sáenz de Urturi ungena kwi-psychology yabalingiswa abakhulu ngenkathi ethula isinqumo secala elisha. Lokhu kulandisa kuhlukaniswe izikhathi ezimbili, u-1992 no-2016. Ngo-1992 kubaliswa ngobudlelwano obuphakathi kukaKraken nentombi yakhe yokuqala, u-Ana Belén Liaño. Ubani ongaba isisulu sokuqala esikhulelwe (ngo-2016) sombulali obulalayo (ngokusobala) olandela isiko elalisetshenziswa eminyakeni engama-2500 XNUMX edlule.
U-Ana Belén watholakala elenga ebheke phansi, waminza emkhunjini owawuntshontshwe ngaphambilini emnyuziyamu eSantander. Ngakho-ke, ukuqonda izehlakalo ezenzeka njengamanje, kuyadingeka ukwazi ukwakhiwa kabusha kwedolobha laseCantabrian ngonyaka we-1992. UKraken, isinqandamathe sakhe, uSolwazi Raúl noRebeca (indodakazi kasolwazi) babambe iqhaza kulo msebenzi. Kungaba imishini ekhonjiswe ngokubukeka okuthusayo komculi osemncane wamahlaya.
En Imikhosi yamanzi uhlangothi olubucayi kakhulu lwe-protagonist luyavela. Ngoba umbulali uxhunyaniswe nesikhathi esedlule sikaKraken futhi ulandela abesifazane abakhulelwe. Ukwesaba kwakhe kufanelekile ngoba iPhini likaKhomishani u-Alba angakhulelwa yena (okungamenza abe yisisulu). Konke ukwesaba kubhebhethekiswa ukuhlukumezeka kwangaphambilini ku-Unai, owahlupheka ngokushona kwabazali bakhe esemncane.
Umnikelo wabalingiswa besibili (njengomlingani wakhe u-Esti noma umkhulu kaKraken, isibonelo) kuvela ukuthi ubalulekile emphumeleni. Ngakho-ke, ekwakhiweni kwengxabano awekho amavesi angenasidingo noma angahleliwe. Ngokuphambene nalokho, yonke imininingwane - noma ingabonakala ingabalulekanga kangako - iyafaneleka esakhiweni sokuxakaniseka nesimangalisayo esenziwe ngumbhali.
Amakhosi esikhathi (2018)
Kuyafana nokulandisa kwe- Imikhosi yamanzie Amakhosi esikhathi kwenzeka emigqeni emibili yezikhathi. Owokuqala (okwamanje) uchaza ukuxazululwa kwecala lokubulawa kukasomabhizinisi ezimweni ezifana nalezo zenoveli esizoqala ukwethulwa. Owesibili uhlobo lwenoveli yomlando kusukela eNkathini Ephakathi ebizwa Amakhosi esikhathi.
Ukuvuthwa okungokomzwelo kuka-Unai
U-Eva García Sáenz de Urturi ukhombisa zonke izici zohambo lwangaphakathi luka-Unai. Usuka ekubeni ngumlingiswa osabisayo ekuqaleni kwesaga, abe ngumuntu ocabangayo futhi ovuthiwe ngokomzwelo. Umbono womfana omkhulu futhi onolaka, uguqula abe yindoda eyazisa umndeni ngaphezu kwakho konke okunye. Ekugcineni, umlingiswa oyinhloko uyakwazi ukubazisa ngokujulile abantu abamzungezile.
Ukuvalwa ngobuciko kwesaga
Ngaphandle kwebanga elibonakalayo phakathi kwezikhathi, Amakhosi esikhathi kuba ukuvalwa okuphelele kwe-trilogy. Ngoba ekugcineni ukuxhumana kuyasungulwa phakathi kwazo zonke izimangalo ezenzekile kusukela lapho Ukuthula kweWhite City nomndeni ka-Unai. Ngokwekhasi Kusuka Kumfundi Kuya Kumfundi (2018), umbhali ushiya "yonke imikhawulo iboshelwe ndawonye, ​​noma kunzima kangakanani kwesinye isikhathi".
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Izinhlobo » I-White City Trilogy
"Ukuphelelwa yithemba". Inkondlo edumisa i-macabre ne-grotesque